Cashar barashada ah oo lagu xiro iOS 9.0-9-0.2 | Wararka IPhone
Casharro si loo JAILBREAK macruufka 9.0-9-0.2
Pangu waxay soo saartay qalab saacad ka badan si ay u sameyso JAILBREAK qalabka leh nooc ka mid ah macruufka 9.0 in macruufka 9.0.2. Nidaamka lagu sameynayo JAILBILY waa mid caqli gal ah, wixii ka dambeeya xaqiiqda ah in nala weyddiistay inaan helno sawirrada sawirada (Kuwan Shiinaha ah ...), oo la mid ah inta kale ee jeellooyinka ee aan sameynay illaa dhowaanahan. Dhibaatadu waxay tahay in, sida caadiga ah qalabka Shiinaha, noocaan ah 1.0 ee Pangu Jailbreak 9 waxaa loo heli karaa oo keliya kombiyuutarada leh nidaamka qalliinka. WindowsIn kasta oo nooca Mac ay u badan tahay inuu soo baxo si ka dhakhso badan TaiG. Marka xigta, waxaan si faahfaahsan uga hadli doonaa talaabooyinka loo qaado JAILBREAK macruufka 9.0-9.0.2
1 Sida loo JAILBREAK macruufka 9.0-9.0.2
1.1 Aaladaha iswaafajiya
1.2 Tallaabooyinkii hore
1.3 Talaabooyinka la raacayo
Sida loo JAILBREAK macruufka 9.0-9.0.2
iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 6 / Plus iyo iPhone 6s / Plus
iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad, iPad Air, iyo iPad Air 2
Haddii aad timaaddo halkan adoo raadinaya Jailbreak iOS 9.1, qalabka la taageeray waa 64-bit oo keliya.
Waxaan barkinta ka raadiney iPhone-kayga Settings / iCloud.
Waxaan ka fureynaa Aqoonsiga Taabashada iyo koodhka goobahaaga isla magacaas.
Waxaan ku dhejineynaa iPhone-keena, iPod ama iPad-ka qaabka diyaaradda.
Waxaan ka soo dejineynaa Pangu Jailbreak shabakada gudaha.pangu.io
Waxaan garaacnay batoonka "Start" ka dibna "Durba Kaaba" markii ikhtiyaarku u muuqdo.
IPhone, iPod ama iPad ayaa dib u bilaabi doona waxayna noo sheegi doonaan inaan dib ugu dhigno qaab diyaaradeed. Waan sameyneynaa howshana way sii socon doontaa.
Muddo ka dib, waxaa nala weydiin doonaa inaan ku taabano codsiga Pangu shaashadda gurigeenna ee iPhone, iPod ama iPad. Waan sameynaa
Marka xigta, waxaa naloo weydiisan doonaa helitaanka giraantayada (?) Waxaan u siineynaa inaan aqbalno.
Qalabka ayaa dib u bilaabi doona mar labaad oo waxaan ku rakibi doonaa Cydia.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Jailbreak » Casharro si loo JAILBREAK macruufka 9.0-9-0.2
Looma baahna in iTunes la furo?
saaxiib maleh, uguyaraan horey ayaan usameeyay JB-ga wax wanagsanna waan sameenayaa, hada waxaan soo dejinayaa xoogaa isbadal ah si aan u tijaabiyo. illaa iyo hadda wax khalad ah kama helin. Sida saxda ah mid leh kumbuyuutarka, ma doonaysid inaad wax qorto ka dib markaad furto oo aad xirto app-ka whatsapp laakiin aad ku xirto multitask ayaa kuu sahlaya.
Ku jawaab Carlos Rincon
Carlos, horey ma u laheyd JB IOS 8? Dusha miyaad ku rakibtay mahadsanid
Ku jawaab napoleon
Waxaan horeyba u haystay JB oo leh iOS 8.4, wixii aan sameeyay waxay ahayd in iPhone-kayga loo soo celiyo 9.0.2, oo aan nadiifiyo JB-ka, ka dib waxaan galiyay nuqul keydkeyga ah wax walbana waxay ka socdaan toban! Waxaan horeyba u gartay iPhone 5skeyga, iyo 6plus labaduba waa qumman yihiin, waxaan raacayaa 4s gabdhood oo abti u ah ilaa iyo haatan wanaag oo dhan.
Mahadsanid, waan isku dayi doonaa, marhore ayaan sameynayaa keyd, sidee ku sameysay tweak-ka sideed u copy gareysay?
hada markaan samaynayo gurmad waxaan fahamsanahay inaan nuqul ka samaynayay goobaha kaydka iyo hagaajinta sida aan ku xasuusto si lamid ah kumuu gudbin nuqulkii waxaanan rakibayaa kuwii aan adeegsaday, sida F.lux iyo Whatsapp ++ oo hore loo cusboonaysiiyay iyo shaqee dhib la'aan, ii sheeg kuwa ay ku xiiseeyaan aniga waxaanan hubinayaa kuwa shaqeeya haddii aad jeceshahay.
Mahadsanid Carlos, waxaan asal ahaan xiiseeyaa iswaafajinta JB iyo itooliyada ama pp25, si aan ugu gudbi karo codsiyada, activesync, ma isku dayday inaad ku rakibto codsiyo activesync? Miyuu shaqeeyaa?
xabsiga ma ka sameyn karaa iphone 6 plus ?? mise waa inaan ka sameeyaa pc-ka waxaan haystaa macruufka 9.0.2, mahadsanid !!
ninyahow, waxaad u baahan tahay pc si aad u sameyso.
Cydia-kayga ayaa xirmaya, maxay u dhacdaa?
Adolfo Garcia dijo
Waxay igu dhacdaa in Cydia uusan fureynin laakiin codsi aan ka helay xabsi kale ayaa shaqeynaya
Jawaab Adolfo García
Waad salaaman tahay, waan qabtay howsha oo dhan laakiin sifiican ayaan u dhammeeyay laakiin markaan wax walba dhameeyo ma arko cydia oo la rakibay, kaliya barnaamijyada pangu. Wax isku mid ah ayaa kugu dhaca adiga? xal kasta? Mahadsanid
Ku jawaab nekem
Nekem, ka soo celi aaladdaada 0, nuqul samee oo ku soo celi macruufka 9.0.2 adigoon gudbin nuqulka, weli waad sameysaa JB, wax walbana way hagaagaan, nuqulkiina dib u soo celi, si kasta oo aad dib ugu sameyn karto howsha JB adoo soo celinaya Aynu isku dayno, waxay igu dhacday aniga oo leh taig's JB noocyadi hore waxaanan dib u soo celiyey anigoo gujinaya bilowga markii Cydia uusan soo bixin, iskuday oo faallo
Waad salaaman tahay, sidee ayaad u soo guurisay tweaks-ka?
Si walbo ma xalisay?
Anigu kama helo dejimaha tweask-ka barnaamijka app settings. qof ma garanayaa meesha ay joogaan?
Charny 73 dijo
Waxaan isku dayi doonaa inaan arko waxa dhacaya !!!
Mahadsanid Carlos laakiin mar saddexaad ayay soo baxday
Salaan! Su'aal halkaas ka jirta ayaa sheegeysa inay la jaan qaadi karto iPad Mini 2, taasi waa, JAILBILYAND ma waafaqsana midka 1aad? Xitaa haddii aan ku haysto iOS9.0.2?
roccoon bunni ah dijo
Waxaan u maleynayaa inay dhibaato ka jirto doorbidaha doorbidaha ama substrate-ka moobiilka ee jebintaan, maxaa yeelay mar alla markii wax walba la rakibo waa hagaag, isbeddelada aad ku rakibto cydia kama muuqaneyso guddiga kormeerayaasha (goobaha)
qof kale oo dhibaatadan qaba?
Ku jawaab raccoonbrown
Isla waxaas oo kale ayaa igu dhaca adiga oo kale, ma aqaano haddii uu yahay xabsi guuldarro ama in ay weli jiraan tweaks la jaan qaadaya iOS9 ...
Ma waxaan ka ognahay wax ku saabsan Jailbreak 8.4.1? Waxaan xiiseynayaa iPhone 5S. Ma doonayo inaan cusbooneysiiyo iOS 9.
Ku jawaab CR54
Haddii ay horeyba ugu soo baxday dhammaan noocyada macruufka 9 waxaan shaki ka qabaa inay u soo bixi doonto nooc kasta oo hore oo aysan lahayn
Sideed u kaydisay tweaks-ka cydia?
Xusuusnow in kani yahay kii ugu horreeyay, inta lagu jiro usbuuca dhammaadkiisa dhibaatooyinka oo dhan waa la xallin doonaa, waxaan tijaabineynaa kiiskan, si aan u idhaahdo ugu yaraan, dhib kuma qabo inaan caawiyo ciddii u baahan, Skype: khpw_1
Cydia sidoo kale waa la xiray aniga !! Waa maxay niyad jab
Iima oggolaan doonto inaan ku sameeyo iPad Mini 2 ama i6 + (oo labaduba leh 9.0.2). Barnaamijka PC-ga wuxuu gaarayaa 100% kayd ah ka dibna markuu diyaarinayo deegaanka wuxuu soo saarayaa qalad 0A ah 45%
Waa shit, waa inaan sugnaa casriyeynta si aan u hagaajino.
geli iTunes-ka kumbuyuutarka oo iska daa sanduuqa keydka ee sirta ah ee iphone-ka, wuu i siiyay qaladkaas anigana waxaan u sameeyay JAILBILY si kaamil ah
Ku jawaab kykeguass
Waxaan rabaa inaan ku sameeyo iPhone-ka la soo celiyey laakiin markaa sidee baan u dhigayaa nuqul keyd ah ama sidee ayaan ugu dhejiyaa? Mahadsanid
Kuwa dhibaatooyinka haysta waxay soo celiyaan oo ku rakibaan 0
Abku wali kumuu soo bixin goobaha laakiin is deji
Ku saabsan nuqulka
Ka dib markii aad sameysay JB-ga aad nuqulkaagii u soo celiso sidii caadiga ahayd
Waad salaaman tahay, sidee tahay aniga waxaan hayaa iphone 6 waxaanan ku haystaa iTunes iyo kaybalka markasta oo aan daarto oo markasta oo aan cusboonaysiiyo ama aan soo celiyo qalad ayaan ku dhacayaa 53, qof ayaa og hadii aan wax qaban karo iyo inkale. Laga soo bilaabo mar hore aad ayaad u mahadsan tahay
Carlos gees dijo
Mar labaad iTunes ku rakib oo haddii aysan shaqeyn, isticmaal pc kale dhibaatadan marwalba waa pc, isku dayga mid ka duwan ayaa ah xalka ugu fiican, noo sheeg sidee tahay
Ku rakibay jeelka iyada oo aan wax dhibaato ah ka jirin iPhone-kayga 6 laakiin marka aad soo degsanayso wax kasta oo isbeddel ah ma shaqeynayo ama kama muuqaneyso goobaha, qaladka jeelka ama khaladaadka is waafajinta? Waxaan u maleynayaa inaan dib u soo celin doono oo aan sii wadi doono xabsi la'aan illaa iyo inta ay ka xasilloon tahay, haddii qofna hayo macluumaad ku saabsan ku guuldareysiga inuu sidaas yiraahdo! 🙂
Doqon (@jacburbur) dijo
cydia tb waa ii xiran yahay. si fiican maahan inuu xirmayo, laakiin waa inuusan ogolaan.
Jawaab Mudito (@jmburdalo)
Waad walwalsan tahay, haddii aad toddobaad sugto, waxay soo saari doonaan cusbooneysiin xallinta cilladaha waxaadna sameyn doontaa JB dhibaato la'aan.
Aynu aragno yaa ugu horreeya ee wax qoraya oo leh kuuma oggolaan doonaan inaad dhaqaajiso qalabka ama shaashadda cad… way socotaa!
Way kafiican tahay inaad dhowr maalmood sugto, qalabkani marar dhif ah ayuu u soo baxaa marka hore shaqadiisa 100%
Cydia sidoo kale way ii xirtaa isla marka aan furo markii ugu horeysay, ma naga caawin kartaa, mahadsanid
Jawaab Raul Delgado
Weli waxaan kuxirannahay macruufka 8.3, waxaan sugi doonaa ilaa bisha Janaayo ama Febraayo ilaa Apple si uu u saxo cayayaanka ios 9 ka dibna aan u xiro
Waad salaaman tahay; Haddii Cydia xiran yahay, IPhone-ka ayaa dib loo bilaabayaa wax walbana waa caadi. Ugu yaraan aniga ahaan iphone 4s raaxo leh.
Ku jawaab LuisF
Lama jaanqaadi karo iPad MINI 1 ???????
Ciise ugu jawaab.
Xaqiiqdii haa, laakiin macruufka 9 ayaa kuugu fiican adiga ipad mini 1? Waxaan cusbooneysiiyay ipad mini 1 xoogaa waan diiday oo waxaan go aansaday inaan dib ugu laabto macruufka 8.4, sidee tahay?
Jailbreak oo ka shaqeynaya 100% iphone 6 + cidya ok kaliya waxaad u baahan tahay inaad cusbooneysiiso repos.
Saaxiibayaal, appsync ma kuu shaqaysaa? Waxaan isku dayaa inaan rakibo qaar ka mid ah codsiyada aan haystay waxayna igu siisaa qalad.
sxb, cydia ma galeyso ipadkeyga 4 .. markasta oo aan isku dayo wey iga bixisaa
Waxay samayn doontaa noooo !!! Maaddaama aan sugeyno 9.1 JAWAABTA DEGDEGGA AH EE WHATSAPP IYO IN AY KU SHAQAYSATO ILAALINTA AAD KA HELI KARTO KOORSADA !!! XD
Jailbreak si guul leh ayaan ugu sameeyay iphone 6keyga, cydia sifiican ayey ushaqeyneysaa iyo kuwa kale, marka wax walbo wey fiicnaayeen. Dheh waxaan hayaa astaanta pangu laakiin tirtir waana intaas. X fiiiiiin !!!
Hagaag, waxaan rakibay wax walba oo qumman markii aan siiya cydia si aan u furo, isla markiiba wuu xiraa mana ii ogolaado inaan galo, fadlan caawi
Waxaan isku dayayaa inaan furo faylka laakiin waxaan helay qaladkan "ma ahan codsi ansax ah oo win32 ah" qof ma i caawin karaa?
Jawaab Mikea RC
kornayl segio dijo
Salaan ma iga caawin kartaa fadlan, waxaan haystaa Ipad mini oo leh iOS 9.0.2 horey ayaan u dhigay JAILBREAK, cydia waa la rakibay laakiin waxaan rabaa inaan rakibo WhatsApp madaama qof garanayo sida loo sameeyo talaabo talaabo mahadsanid caawimaadda aad u fiican ee dambe.
Jawaab segio kornayl
Markii aan ku isticmaalay whatsapp ipad-ka waxaan u sameeyay sida soo socota. Waxaan rakibey tweek whatspad ka dibna waxaan ku rakibey whatsapp anigoo ka soo dejinaya internetka .ipa-ka oo aan ku rakibayo pp25 ama itools, maxaa yeelay si toos ah uga soo degsashada appstore lama sameyn karin. (1 sano ka hor)
Maxay pangu u dooneysaa inay ku gasho sawirada? Haddaanan aqbalin, qalad bay i siisaa. Ma ogtahay sababta ay u doonayaan inay galaan sawirrada?
Waad ku mahadsan tahay wax walba
Kuwa idinka mid ah ee dhibaatooyinka ku qaba cydia, MAAHA LOO BAAHAN YAHAY IN LA SOO CELIYO FIRMWARE adoo samaynaya tilaabooyinka jaibreak mar labaad oo ku filan, ka hor, ka bax icloud iyo dhexda jaibreak, markay ku weydiiso inaad furto barnaamijka Pangu, fur sawirada barnaamijka kahor. Sidan ayaan ku gaadhay ka dib isku dayo dhawr ah
Way ii shaqeysay markii aan furayay barnaamijka sawirada dhammaantood kadib 4 isku day oo aan guuleysan. +1 😉
Ku jawaab leekhaz
Joe, sidee u sameysay Markaan isku dayo inaan markale sameeyo, waxay ii sheegtaa in JAILBILYKA horay loo dhammeeyay, waxaana doonayaa inaan sameeyo iyada oo aanan dib uga soo celin 0.
Nabadeey Andrés, in kasta oo pangu u aqoonsado taleefanka jaibreak, gujinta badhanka bilowga pangu wuxuu bilaabi doonaa howsha markale.
Waxaan haystaa Iphon 6 oo leh casriyeyntii ugu dambeysay waxayna i siineysaa qaladkan QALADKA KU SOO DHACAY DIYAARINTA DEEGAANKA ER CODE OA qof ayaa caawin kara
Jooji kaydinta sirta ah ee iTunes: "Haddii aad qalad ku helayso 0A inta aad xarigga ka jareyso, dami" Encrypt backup "oo ku yaal iTunes hoostiisa bogga" Soo Koobid "ee qalabkaaga macruufka ah." https://www.reddit.com/r/jailbreak/wiki/ios9jailbreakhelp
Thanks joe waxaan doonayaa inaan ka tirtiro iTunes, waxa dhaca waanan kuu sheegi doonaa mahadsanid
Adaa mudan! Haddii aad rakibi karto nooca ugu dambeeya ee iTunes iyo halka ay ku qoran tahay Samee keyd si otomaatig ah, uncheck Encrypt iPhone sanduuqa keydka, si aad u ogaato in taasi ay xallinayso qaladka.
Ma arki karo khaladaadka lagu rakibay xulashada goobaha, ma jiraa qof yaqaan sida loo xaliyo tan? Mahadsanid
Dhowr daqiiqo ka hor ayaa la cusbooneysiiyay xamuulka doorbidista kaas oo horeyba kuu oggolaanaya inaad ku aragto hagaajinta goobaha
Waad salaaman tahay waxaan kuhelay khaladkan QALADAAN EE DIYAARINTA DEEGAANKA ERR CODE OA waxayna igu yiraahdeen waa inaad naafada ka dhigtaa iTunes iTunes-ka qaylada, qof ayaa garanaya sida loo sameeyo, mahadsanid
Horey waan u qabtay oo si sax ah ayey u shaqeysaa. Waxay ahayd inaan sameeyo dib u soo celin tan iyo markii aan khalad ku dhacay, markaan sidaas sameeyay waxaan awooday inaan si deg deg ah u sameeyo JAILBREAK!
Qalcadda Blad dijo
Sameeyay jahawareerka dhammaantiis, furi cydia oo rakibi khaladaadka laakiin markaan rabo inaan ka maareeyo shaqooyinkeeda goobaha, kuwa aan rakibay ma muuqdaan, qofna ma leeyahay sharaxaad taas?
Ku jawaab Blad castell
Maxaad u codsaneysaa marin u helida ciribta si aad ugu rakibto cydia? Waa amaan?
Ku jawaab Ricky
Miyaad ku rakibtay nooca iphone-kaaga kombiyuutarka kombuyuutarada itunes ama iphone-ka ota?
Waxaan haystaa iphone 4s waxaanan sameeyaa dhamaan talaabooyinka ay sheegto laakiin markay ku shubanayso 55% waxaan helayaa khalad oranaya «Qalad ayaa ka dhacay diyaarinta deegaanka, khalad khaldan (0A)
Iga raali noqo ... waa la rakibay waa la tirtiray ???
Ignacio Del Pino (@yaasmin_ahayn) dijo
Ka dib markii aan jebiyo, maxaan sameeyaa si aan u rakibo codsiyada?
Jawaab Ignacio Del Pino (@Benjaminplaguee)
Theo Corsa dijo
Su'aal haddii aan tirtiro codsiga pangu, ka dib markaan wax walba si fiican u rarto oo aan horey u haysto cydia, waxbaa dhacaya?
Jawaab ku sii Teo Corsa
Waxaan helayaa qalad markay tagto 70% waxayna ii sheegtaa inay qalad leedahay (55), maxaan sameeyaa si aan u xaliyo?
wiil fernandez dijo
Miyuu qof ka caawin karaa qaladka 55, waan helay mana rakibi kari waayo maxaa yeelay meeshaas kama dhacayo, mahadsanid
Ku jawaab chico fernandez
Waxay noqon kartaa inaad bixiso? Mise cidbaa haysata wax koodh ah oo ay dhigato? Waan kucusub ahay tan !!
Waad salaaman tihiin, appsync ma kuu shaqaysaa mahadsanid
Waa run, qalad 55 ayaa soo baxa, anigana waan helaa mana garanayo waxaan sameeyo, qof ayaa wax garanaya
Ku jawaab stefan
way ii shaqaysaa
Waad salaaman tihiin, waxaan ku sameeyay JB ipad Air, wax walba waa hagaagsanyihiin, APPAKE ayaan rakibaa, laakiin markaan app soo dajiyo oo aan rakibo, barnaamijyada badhkood, Appstore, telefoon, fariimo, iwm waa la tirtiray maxaan sameynayaa qaldan
Jeelka laba jeer ayaan qabtay, waxaan rakibay wax walba oo hagaagsan, cydia oo leh keydkeeda iyo wax walba laakiin haddii aan dib u bilaabo taleefanka wuxuu ku sii nagaanayaa guriga, qof leh dhibaatadan oo kale?
Telefoonkaygu waa iPhone 6s
Ysai toor dijo
Waa salaaman tahay, qofna ma garanayaa haddii aan Jailbreak karo qalabkeyga haddii aan ku cusbooneysiiyo OTA? Mise waa inaan mar kale rakibo macruufka
Ku jawaab Ysai Torres
Talaabo @ n dijo
Waxay u shaqaysaa IOS 8.4.1 ???. ???? WAAD KU MAHADSAN TAHAY JAWAABTA
Jawaab Steb @ n
wuxuu u shaqeeyaa IOS 9.1, BETA 5 ????
Subax wanaagsan waxaan helayaa qaladkan Khalad ayaa ka dhacay diyaarinta deegaanka, lambar khaldan (55)
Habeen wanaagsan waxaan isticmaalaa Mac waana inaan daaqad ka amaahdaa markaan PANGU u soo dejisto daaqad markaan ku xiro iPhone 5, PANGU ima aqoonsan waxayna ahayd inaan soo dejiyo iTunes ka dibna waxaan ku guuleystey Jailbreak
hello waxaan soo galiyay verison ios9.0.2 iyo JAILBREAK laakiin hada markasta oo aan isku dayo inaan rakibo barnaamij waxaan helaa xaqiijin ku guuldareysatay boggaga itools 3.0 wax la mid ah sideen ku xallin karaa tan, mahadsanid
Kuwa khaladka ku dhaca 53, isla waxbaa igu dhacay aniga iyo wixii aan sameeyay ayaa Pangu ku maamulayay qaab maamul (xitaa sidaas oo ay tahay, way soo muuqatay laakiin markii saddexaad waxay isku dayday inay noqoto 100%, waxaan horayba ugu arkay fagaarayaasha kale in isla waxbaa dhacaya, iskuday dhawr jeer illaa ay ka sii harto.
Waad salaaman tihiin, markii ugu horaysay dhawr jeer isku day maan helin cydia, laakiin durba, dhexda hawsha, markay ku weydiiso inaad furto barnaamijka pangu ee iphone, waxay furaan barnaamijka sawirada marka hore kadibna pangu waana taas, wax walba waa hagaagsan yahay
hello horay ayaan u haystay cydia laakiin markii aan rabo inaan soo dejiyo tweaks khaladkan ayaa u muuqda: SUB-PROCESS / USR / LIBEXEC / CYDIA / CYDO AYAA LAGU SOO CELIYAY COD QALAD AH (2)
I GARGAAR FADLAN
Dhibaato ayaan ku qabaa safari si isdaba joog ah u raritaanka bogga, isla wax ma ku dhacdaa qof?
Andy Guti dijo
Waad salaaman tahay, qof i caawin kara fadlan, waxaan isku dayaa inaan JB ku dhejiyo iphone-kayga laakiin dhibaato ayaa i haysa ka dib markii ay igu tiri "Uploading JB resources" waxay i weydiineysaa inaan dib u xirto iphonekeyga, ma jiraa qof og waxa dhibaatadan ay sabab u tahay? Waan ku faraxsanahay haddii aad i caawin karto.
Jawaab Andi Guti
Wax walba sifiican ayey iigu socdaan, ilaa aan soo celiyo. Taasi waa in la yiraahdo. Markaan sameeyo JAILBILSKA waxaan dhigaa meesha lagu keydiyo, waxaan ku rakibaa isbadal la jaan qaada (activator wali ma ahan), waan soo celiyaa, laakiin su'aashu waxay tahay inay soo celiso waxay rabto. Waxaan haystaa in badan oo iyaga ka mid ah aniga oo aan rakibin, midkoodna lacag la bixiyo ama la tijaabiyo. Waxaan rakibay "apple file ... 2", "appsync 5 to 9" iyo wixii lamid ah mana aqoonsana barnaamijyadaas. Si kastaba ha noqotee, qaar waxaan ku rakibi karaa "gacanta".
Mahadsanid waana ka xumahay tirade.
Ku jawaab Ferdi
Ferdi, aad baad ugu mahadsantahay inaad kahadasho arintaas, waan soo celiyey ugu dambayntiina waa la rakibey co aad baan kuugu mahad naqayaa !!!
mar haddii JB-du dhammaato, waxay soo degsan doontaa cydia caadiga ah ama?
Ku jawaab FERCHO
Waxaan sameeyay jb la'aan ilaa cydia ay soo baxday iyo sida ay u furmay una xirmay, waxaan aqriyay inay dhici karto oo waxaan ka soo saaray warshada, waana xiiso badanahay markaan ka soo saaro warshadayda idkeyga ma joogo oo a s… .. @ yahoo.com Anigana taydu ma aha, waxba ma qaban karo, waxaan u baahanahay caawimaad, sidoo kale waxaan haystaa qaansheegadka wax iibsashada iyo dammaanad qaadka, laakiin ma ogi haddii ay u qaadanayso rafcaanka inay wax dhahaan. Mahadsanid
qofna ma garanayaa sababta cydia u xirto kaliya markay tiraahdo (diyaarinta filesysten) ???
Ku jawaab jaak
Waxay iga caawinaysaa waxay joogi doontaa oo keliya 15% kadib markaan rakibo 100% keydka kadib markay dib u bilawdo, waxaan mar kale galiyay qaab diyaaradeed waxayna kaliya ii sheegaysaa inaan ku xiro qalabka oo aan bilaabo oo halkaasna wax caawimaad ah mar dambe
Salaan ka timid Mexico Waxaan isku dayay inaan ku sameeyo JB-ga mackeyga 3 mashiinno kala duwan oo kala duwan, windows windows xp sp3, windows 7 sp1, windows 8, iyo pangu ma ogaan karo iphonekeyga, qofna miyaa dhibkan haysta?
Waad ku mahadsan tahay horay!
Jawaab Juan Juan Osorio
Waxay i siisaa qalad ku saabsan ipad 2, oo la soo celiyo sidii cusub, markii aan gaaro 65% iyo in aan u furay pangu qaabka maamulka sida ay halkaas ku yiraahdeen, waxay i siineysaa lambar qalad ah 51, qof ayaa dhacaya?
Salaan qaado hawsha. Si sax ah laakiin maalmo yar kadib. Waxaan ilaaway oo aan dib u kiciyay qalabkii gacanta oo waxaa lagu xiray guriga. Ma jirtaa waddo lagu hagaajiyo?
Waa salaaman tahay qof ma i caawin karaa Dhibaato ayaan ku qabaa whatssap ++ v1.6r-18 ios9.0.2 Ma heli karo mid gaar loo leeyahay laakiin koox koox whatssap ah haddii qof garanayo xalka mahadsanid
Waxaan ku cusubahay iPhone-ka waxaanan rabaa inaan soo dejiyo cydia oo aan rakibo pangu laakiin markaan furo ayaan qalad ka helayaa wixii aan akhriyay waa inaan soo dejiya iTunes laakiin ma aqaano sida loo sameeyo, way i caawin kartaa
Ma lagu rakibi karaa BlackBerry Z10?
Waad salaaman tahay, waxaan haystaa alcatel androy laakiin ma dajin karo whatsapp, kaliya waxay soo degsataa 55% waxayna u muuqataa isku mid mana waafaqsana wixii hore
Jawaab Catrachito Mejia
Aniga whatsapp-kayga lama soo dejin, kaliya 55% ayaa la soo dejiyaa aniguna waxaan naqshadeeyaa cusbooneysiin mana cusbooneysiiyo
Sida loo Jailbreak macruufka 9 Qalabka
Pangu wuxuu sii daayaa JAILBREAK aan xirneyn oo loogu talagalay iOS 9.0-9.0.2